ကောင်းကင်ကို: 04/01/2012 - 05/01/2012
Posted by Kaung Kin Ko at 9:46 PM 1 comment: Links to this post
စာအုပ်ထဲက ယဉ်ကျေးမှုတွေကို အိပ်မက်ဖို့
ပန်းဦးဆက် ဓလေ့ကို အသက်သွင်းမယ်။
ဘယ်သူတွေ သတို့သမီး လုပ်မလဲ?
Posted by Kaung Kin Ko at 5:56 PM4comments: Links to this post
Labels: Facebook status, My poems, သရော်စာများ
သူက လက်တွေ့ မဆန်တာလား
ကျနော်က လက်တွေ့ မဆန်တာလား
လူနဲ့သမင် စကားပြောတတ်တာကျ သူယုံတယ်။
ကျနော့်နှလုံးသားလေး စကားပြောတတ်တာကျ သူမယုံဘူး။
Posted by Kaung Kin Ko at 7:40 PM3comments: Links to this post
အလင်းဖြူတမ်းချင်းထဲက ကဗျာတပိုဒ်အတွက် ခရေငယ် လုပ်ပေးထားတဲ့ ဒီဇိုင်းပါ။ ကဗျာတပုဒ်လုံး ဖတ်ချင်ရင် အလင်းဖြူတမ်းချင်း
Posted by Kaung Kin Ko at 6:01 PM No comments: Links to this post
တရုတ်က ကြွလာတဲ့ စွယ်တော်။
သိပ္ပံနဲ့ ဘောင်ခတ်ခံနေရသော လက်တွေ့ဝါဒီများ
Supernatural ဆိုသော စကားဟာ
ငလျင်လှုပ်တော့.. Church တွေ ပြိုတယ်။
ဗလီတွေ ဖြိုတော့.. ဗလီတွေ ပြိုတယ်။
ဘုရားမီးပူဇော်ပြီး ပေါ့ဆတော့.. ဘုရားမီးလည်း လောင်တယ်။
အစိမ်းရောင်တွေ ပစ်တော့.. ရွှေဝါရောင်တွေ သေတယ်။
ဘာ တန်ခိုးတော်မှ မရှိ။
Posted by Kaung Kin Ko at 8:38 PM 11 comments: Links to this post
ညီအရင်းတွေထက်တောင် အသက်ငယ်တဲ့ အကိုအရင်းတွေ ရှိတယ်။ (U21, U22 ဘောလုံးသမားတွေ)
ကမ္ဘာကျော်တွေနဲ့လုပ်စားနိုင်တဲ့ လောင်းကစားဒိုင်တွေလည်း ရှိတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေနဲ့ သွေးနှောထားတဲ့ ကပြား တိုင်းရင်းဆေးတွေရှိတယ်။
ခွေးသေကောင်ကိုတောင် ဆတ်သားခြောက်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်သူတွေလည်းရှိတယ်။
လမ်းကြားမှာ အမှိုက်ပစ်ချတတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး သမားတွေရှိတယ်။
လွတ်လပ်မှုတွေကို “လု”ယူချင်တဲ့ “လု”အခွင့်အရေးသမားတွေလည်း ရှိတယ်။
နိုင်ငံရေး အရေခွံအလဲမှာ ရုတ်ခြည်း နီရဲသွားတဲ့ “ပုတ်သင်သရုပ်ဆောင်” တချို့လည်းရှိတယ်။
ညစ်ပတ်ပေမဲ့ အနီကတ်အပြမခံရ…ဆုတွေတောင် ရသွားတဲ့ သမ္မတလည်းရှိတယ်။
Posted by Kaung Kin Ko at 3:58 PM4comments: Links to this post
Posted by Kaung Kin Ko at 8:54 PM7comments: Links to this post
ရန်လိုမှုတွေနဲ့ ချစ်ချစ်တောက်ပူလောင်နေတဲ့ နိုင်ငံမှာ
ဗုဒ္ဓပေးတဲ့ အရိပ်တောင်မှ စက္ကူကျားပဲ….
ကိုယ့်ဂိုးကိုယ် ပြန်သွင်းကြတာ တော်တော်လှတယ်။
ရန်ကုန်မြို့လယ်က ခေါင်းပြတ်တွေတောင် ရေးဖူးတယ်။
မြန်မာကို ကမ္ဘာ သိအောင်ပြဖို့က
ဘာမှ သိပ်ပြီး မလိုဘူး။
အရှက်နဲ့ နီးလွန်းတဲ့ ရောဂါဆိုး
လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ကိုယ်၌က ကင်ဆာဆဲလ် ဖြစ်နေတော့။
Posted by Kaung Kin Ko at 2:36 PM6comments: Links to this post
အဲဒီ့အချိန် ငါခိုနေတဲ့ဗုံးခိုကျင်းထဲ ဗုံးကျကွဲခဲ့ (by ခရေငယ်)
သူခိုးကျင့် သူခိုးကြံနဲ့စားရတယ် . . . ။
အသက်အောင့် ရပ်ကြည့်နေရတယ် . . . ။
နားညောင်းတာပဲ အဖတ်တင်တယ် . . . ။
ဒီနေရာမှာ . .
အဲဒီလို . . မတရားမှုတွေ ကျောမှာတင်တဲ့ကားကို
တချို့တွေ မောင်းသွားကြတော့ . . . .
Posted by Kaung Kin Ko at 3:24 AM2comments: Links to this post